ငြိမ်းချမ်းသောသာသနာများနှင့်ဆရာများ အမြင်(၁) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ငြိမ်းချမ်းသောသာသနာများနှင့်ဆရာများ အမြင်(၁)
Posted by အတိသဉ္ဖာ နာဂရချစ်သူ/ သန်းထွဋ်ဦး on Oct 26, 2011 in Creative Writing | 10 comments
ဘာသာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ရေး လူသားပေါင်းစုံ အမြင်များမလွဲကြစေချင်
““သမိုင်းစဉ်တလျှောက်လုံး၌ မြန်မာတိုင်းရင်းသားမှန်လျှင် (ကိုရှုံးနိမ့်မှုများနှင့်လြူေ
ပာသော တိုင်းရင်းသားမဟုတ်) ဘာသာအယူဝါဒ မည်မျှပင်ခြားနားစေကာမူ တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း ဟူသော မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ဖြင့် ညီညွတ်သင့်မြတ်စွာ ဆက်ဆံပေါင်းသင်းနေထိုင် ကြသည့် သာဓကကို ဝေးဝေးရှာရန်မလိုပါ။ရန်ကုန်မြို့သိမ်ကြီးဈေးနှင့်လသာ မြို့ နယ် တစ်ဝိုက်ကိုကြည့်ပါ။
သိမ်တော်ကြီးနှင့် ဆူးလေစေတီတော်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်အစ္စလာမ်ဗလီ ဝတ်ကျောင်းများ၊ဟိန္ဒူဘုရားရှိခိုးကျောင်းများ၊ခရစ်ယန် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများ၊တရုတ်ဘုံကျောင်းအမျိုးမျိုး တို့ လည်းရှိကြသည်။ထိုဒေသ ပတ်ဝန်းကျင်တွင် နေထိုင်ကြသူတို့ သည် မိမိတို့ ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာအလိုက် ဆူးလေဘုရားကုန်းပေါ်တက်သူတက်၊ဗလီတက်သူတက်၊ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းသွားသူသွား၊ဘုံကျောင်းတက်သူတက် အသီးသီးသွားလာ နေထိုင် ကြရာ ကွဲပြားသော၊ခြားနားသော ဘာသာယဉ်ကျေးမှုများသဟဇာတဖြစ်နေကြပုံကိုပေါ်လွင်စေအောင် သရုပ်ဖော်ပေးနေပါသည်။
ဤကဲ့သို့ မြင်ကွင်းမျိုးကို အခြားသော တိုင်းတစ်ပါးတို့ တွင်မည်သူမျှမြင်တွေ့ ဖူးကြလိမ့်မည် မထင်ပါ။မြန်မာနိုင်ငံ၌ သာလျှင် ဘာသာရေးအားဖြင့် သဘောထားကြီးသော သရုပ်သကန်ကို တွေ့ နိုင်ပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသည် ဘာသာအယူဝါဒ တို့ အပေါ်လေးစားသောသဘောထား ရှိမြဲဖြစ်လေသည်။””[မောင်ထင်(၁၉၈၀)၊လုပ်သားပြည်သူ့ နေ့ စဉ်။၂၂-၁-၈၀(စာ-၄)]ဟူ၍ဖော်ပြထားရာလေးစားဖွယ်ဖြစ်လေသည်။
ထို့ အပြင် ဆရာတက်တိုး(၁၉၁၃-၂၀၀၃)ကလည်း“အနေတတ်ဖို့ လိုသည်”ဟူသော ဆောင်းပါး၌ လူ၏တန်ဖိုးတွင် မြတ်သောစရဏ အကျင့်ရှိရန်လိုအပ်ပုံကိုဖော်ပြပြီး-
““တကယ်တော့ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသည် ပထဝီအနေအထား အားဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာ ၏တန်ခိုးအာနုဘော်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း အခြေအနေငြိမ်းအေးလှပါ၏။(အခြားဘာသာဝင် လူနည်းစုတို့ လည်းငြိမ်းချမ်းစွာနေကြပေသည်။သူတို့ ၌လည်း စရဏ တရားရှိကြသည် ဆိုရပေမည်။)ထို့ ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ အနေတတ်ဖို့ လိုသည်။ကျွန်တော်တို့ မှာ စရဏ တရားရှိပြီးဖြစ်ရာ ခိုင်မာသည်ထက်ခိုင်မာရန် အားထုတ်ကြဖို့ သာလိုလေသည်။မတရားမှု၊မသမာမှု၊ရက်စက်မှုစသည့်မကောင်းသော အမူအကျင့်များကို အထူးဂရုစိုက်၍ ရှောင်ကြဉ်၍၊စေတနာမှန်ကန်လျှက် မေတ္တာ၊ဂရုဏာ၊မုဒိတာပွားလျှက် မိမိတို့ ရင်ဝယ်ကိန်းပြီးလျှင် လက်တွေ့ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ကြရပေလိမ့်မည်။””ဟူ၍ရှုမြင် သုံးသပ်ထားပုံမှာ လူတိုင်းလိုက်နာ ထိုက်ပါသည်။[တက်တိုး(၂၀၀၀)”အနေတတ်ဖို့ လိုသည်”။၂၁ရာစု စီမံခန့် ခွဲမှုပညာ မဂ္ဂဇင်း။အမှတ်(၂)။၁၂၁-၁၂၅]
ဘာသာယုံကြည်မှုကို အကြောင်းပြု၍ အငြင်းပွားဖွယ်မသင့် အနိဋ္ဌာရုံ မဖြစ်သင့်ပုံကို သမိုင်းပေါမောက္ခဆရာ ဒေါက်တာသန်းထွန်းက သူ၏အအြင်အဖြစ် ယခုလို ဖော်ပြဖူးပါတယ်။မြန်မာပြည်တွင် အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ကြသူတို့ ရှေးပဝေဏီ ကတည်းက သင့်မြတ်စွာနေထိုင်ခဲ့ ကြပုံကိုအစချီပြီးနောက်-
““ငါတို့ ကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ဖြစ်တယ်။သူတို့ က ခရစ်ယန် လို့ မခွဲခြားပါ။မွတ်စလင်ကလည်း ကျွန်တော်တို့ ကို ဂရုတစိုက်အရေးထားပြီးဆက်ဆံတာ မျိုးမရှိပါ။ယုံကြည်မှုသည်းခံရေး(Religious Toleration)ကိုအဲဒီအခါက ပဲ ကျွန်တော်တို့ ကျင့်သားရပြီး၊နားလည်ပြီးသားဖြစ်ခဲ့ပီလို့ ထင်ရပါတယ်။ယုံကြည်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုယ်ကအနိုင်ရအောင် အလုအယက်မပြော သင့်ဘူးလို့ နားလည်ပြီးသားဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်။ ကောလိပ်ကျောင်းကိုရောက်ပြီး သမိုင်းဘာသာကိုစပြီးသင်တဲ့အခါ ယုံကြည်မှုစစ်(Religious War) ကြောင့် ဥရောပနဲ့ အနောက်အာရှမှာ ဘယ်အထိဒုက္ခရောက်ကြရတယ် ဆိုတာတွေကို ကောင်းကောင်းသိနားလည်လာပါတယ်။ယုံကြည်မှုစစ် ပြီးတော့ နယ်မြေလုစစ်(Expensionnism)ပြီးတော့ စီးပွားရေးစစ်(Mercanlism)တွေ ဆက်ခါဆက်ခါ တွေ့ ကြပြီးမှ ငြိမ်းချမ်းရေးစစ်. (Fighting for Peace)ကိုတွေ့ ရပြန်တယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ စစ်တိုက်ယူရတယ်လို့ တောင်ပြောပါသေးတယ်။ဒါပေမယ့် စစ်ဟာစစ်ပါဘဲ။ဘယ်လို အကျိုးအမြတ်တွေ ရတယ်ဆိုပေမယ့်လူတွေရဲ့ အသက်နဲ့ ရင်းနှီးရတာဖြစ်လို့ အကြီးအကျယ်ဝမ်းသာအားရ ထောက်ခံသင့်တယ်လို့ မပြောနိုင်ပါ။ပြောနေကြတိုင်းပြောရရင် အနိဋ္ဌာရုံတွေ့ ရင်လဲ နောက်ထပ်မတွေ့ အောင်ရှောင်ရှားရန်၊က္ကုဋ္ဌာရုံတွေ့ ရင်လဲ ဒါမျိုးထပ်ပြန်တလဲလဲ ရရှိနိုင်အောင် ကြိုးစားကြဖို့ တိုက်တွန်းခွင့်ရပါတယ်””ဟုဖော်ပြထားသည်မှာ အလွန်မှတ်သားဖွယ်ကောင်းလှပါတယ်။[သန်းထွန်း(၂၀၀၅)။မြန်မာ့သမိုင်းမြေပုံများ။အချီး။ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်များပုံနှိပ်တိုက်။င-စ]
“မြန်မာ ၊ ဗမာ မ ဗုဒ္ဓဘာသာ တစ်ယောက်ကို ရအောင်ယူနိုင်ရင် ၊ အာကေ ဘယ်လို ဆပ်ပလိုင်းပေးမယ်” ဆိုတာ ကို သန်းထွဋ်ဦး တစ်ယောက် မသိဘဲနေတာလား ။ မသိချင်ဟန်ဆောင်ထားတာလား ။ ဗုဒ္ဓဘာသာ မဟုတ်လို့ များလား ။ ပါစင်နယ် ဆိုင်သွားလျှင် ခွင့်လွှတ်ပါနော် ။ ဘာရယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး ။
ထင်သလောက် မဟုတ်သေးဘူး ဆိုတာ လေး ကို ပြောချင်လွန်းအားကြီးလို့ မန့် လိုက်တာ
အစ်ကိုပြောတဲ့ “မြန်မာ ၊ ဗမာ မ ဗုဒ္ဓဘာသာ တစ်ယောက်ကို ရအောင်ယူနိုင်ရင် ၊ အာကေ ဘယ်လို ဆပ်ပလိုင်းပေးမယ်” ဆိုတဲ့ information က လုံးဝမှားယွင်းနေပါတယ်… ယခင်စစ်အစိုးရလက်ထက်က ဘာသာရေးအဓိကရုံးဖြစ်အောင် ဖန်တီးခဲ့တဲ့ဝါဒဖြန့်သတင်းတွေပါ…တကယ်ပေးရိုးမှန်ရင်
မွတ်စလင်တိုင်းဘာသာခြားတွေဘဲလိုက်ယူနေမှာပေါ့… ကျွန်တော့်အထင် ၂၀၁၁ မေလ မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ တောင်ငူမှာ ဗလီတွေဖျက် မွတ်စလင်တွေကို
ခောတ်ပညာတတ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဖြစ်နိုင်၏ ၊ မဖြစ်နိုင်၏ကို ချင့်ချိန်ပြီးမှ ယုံပေးပါလို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်…ဘာသာခြားတစ်ယောက်ကိုယူ မယူဆိုတာ ယူတဲ့သူရဲ့ personal preference နဲ့ဘဲ သက်ဆိုင်ပါတယ်…အစ္စလာမ်ဘာသာက ဘာသာခြားကိုယူဖို့အားမပေးပါဘူး.. အခုလို တခုတ်တရရှင်းပြနေတာကလည်း အမြင်စောင်းနေတာတွေကို ပြေပျောက်စေချင်လို့ပါ (negative intention မပါပါ)…
ဒီသဟာ ကတော့ဖြင့် မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှ ဝင်ရှင်းပေးလို့ မရနိုင်သေးတဲ့ အငြင်းပွား
ရှင်းလေ ရှုပ်လေ ဖြစ်ကြရမှာ သေချာနေပီးသား…၊
ကိုပေ ပြောတဲ့ အကြောင်းရပ် ကိုမေးကြည့်မိပြန်တော့ သွေးခွဲတဲ့စကားလို့ဆိုပြန်တယ်…၊
ကျုပ်လဲ ဘယ်လိုနားလည်ရမလဲ မခန့်မှန်းနိုင်တော့ပါဘူး ကိုပေ ရာ ။
မောင်သန်းထွဋ်ဦး ရေ ။
အဘ သိသလောက်တော့ ။
မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဘာသာရေး ခွဲခြားဖိနှိပ်မှု ရှိတဲ့နိုင်ငံ နော် ။
ပြည်တွင်းက ဆရာတွေရဲ့ စာတွေချည်းပဲ ဖတ်ရင် မလုံလောက်ဖူးနော် ။
မြန်မာ တွေက ကိုယ်ဖာသာကိုယ် အမွန်းတင်တဲ့ စာတွေသိပ်ရေးတာနော် ။
တကယ့် တကယ် သေချာကြည့်လိုက်တော့ ဘယ်ကဏ္ဍမှာမဆို
ကဏ္ဍစုံ ကမ္ဘာ့ အညံ့ဆုံး Top Ten စာရင်းဝင် နော် ။
အောက်ဆုံး Top Ten မှာ ကဏ္ဍစုံ ရောက်နေတယ်ဆိုတာ
အလကားတော့ မဟုတ်ဘူး အမှန်တကယ် ညံ့လို့သာ ရောက်တာနော် ။
အဲတော့ သူတို့ပြောတိုင်း စွတ်ယုံလို့ မဖြစ်ဘူး ။ သတိထားရမယ် ။
စေတနာနှင့် ပြောတာနော် ။ စိတ်မဆိုးပါနှင့် ။
မြန်မာနိုင်ငံဟာ ဘာသာရေး ခွဲခြားဖိနှိပ်မှု အရှိဆုံး တနိုင်ငံ လို့ပြင်ပေးလိုက်ပါတယ်..နော..။
တခြားမပြော.. ဗုဒ္ဓဘာသာအချင်းချင်းထဲတောင်.. ငါ့ဟာကြီးမှ..အမှန်တဲ့.။
သမ,ယုံတင်မဟုတ်.. ဖမ်းပြီးထောင်ထဲပါထည့်တယ်..။ ကွိ.. ကွိ..။
Updated September 14, 2011 21:20:03
China, Burma, and North Korea have all been named among the world’s eight worst violators of religious rights.
တိုင်းပြည်တစ်ပြည် ငြိမ်းချမ်းသာယာမှု၊တိုးတက်ကြီးပွားမှု မှာ လူမျိုးဘာသာ အသီးသီးနားလည်ရင်းနှီးမှုအခြေခံပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။လူမျိုးရေး၊ဘာသာရေး ပဋိပက္ခများရှိနေသော နိုင်ငံတို့ မှာ တိုးတက်ကြီးပွားရန်ခဲယဉ်းပါတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မိဘဘိုးဘွားများ(ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နှင့်အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်)ဘာသာ၊သာသနာရေးပြောဆိုကြရာ၌ ကမ္ဘာ့ ဘာသာ၊သာသနာကြီးများမှာ ကာလံဒေသံအလျောက် ပညတ်အရ ကွဲပြားသော်လည်း၊ပရမတ်သဘောအရ အခြေခံများတူညီကြကြောင်းပြောဆိုသည်ကို ကြားဖူးပါတယ်။မြန်မာ့သမိုင်း အမှတ်အသားတို့ တွင် မြန်မာဘုရင်မင်းမြတ်တို့ ကိုယ်တိုင်က နိုင်ငံခြားဘာသာဝင် တို့ အပေါ် သူတို့ ၏ဝတ်ပြုကျောင်းများ တည်ဆောက်ပေးခြင်း၊ထောက်ပံ့ပေးခြင်း သာဓကများစွာရှိပါတယ်။အနီးစပ်ဆုံးပြောရရင် မင်းတုန်းမင်းတရားကြီးရဲ့ ကောင်းမှုဖြစ်တဲ့ ဒေါင်းဗိမာန်ဇရပ်ကြီးတစ်ဆောင်ကို မက္ကာမြို့ တွင်ယနေ့ ထက်တိုင်မြင်တွေ့ နိုင်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့လူသားများ ဦးထိပ်ထား၍ ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ကြသည့် ဘာသာအယူဝါဒတိုင်းကို ရိုသေလေးစားဂါရဝထားရမည်။ဘာသာအယူဝါဒ အသီးသီး၏ မွန်မြတ်သည့် အဆောက်အဦးများ၊ယဉ်ကျေးမှုဗိမာန် များကိုမပျောက်ပျက်အောင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရမည်။ဤအကြောင်းအရာကို အစ္စလာမ်တို့ ၏ ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်၌ အလေးအနက်ညွှန်ပြထားကြောင်းသိရပါတယ်။
ကိုမောင်ပေရေ ကျွန်တေဘ်ေက ဘဲဗဟုသုတအားနည်းလေရော့သလား. မသိလေတော့ပါဘူး။အကိုတော်ပြောတဲ့ အာကေ ရတဲ့ကိစ္စမျိုးတော့ မကြားဖူးသေးပါလို့ ပါ။အကိုတွေကို ပြန်ပြောရတာ အားနာလိုက်တာ. အမှားပါခဲ့ရင် သီးခံပေးပါနော်။
မနေနှိုင် မထိုင်နှိုင် ၀င်ဆွေးနွေးဦးမယ်ဗျာ …….
မရောသင့်တဲ့ နေရာ ၊ မနီးသင့်တဲ့ နေရာ မရောတာ ၊ မနီးတာ အကောင်းဆုံးပဲ ထင်ပါတယ် ။
ရန်ထဖြစ်နေရမယ် ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော် …
ဖက်လဲ တကင်းတော့ နေလို့ကောင်းဟန် မတူဘူးဗျ ..
အိုးချင်းထား အိုးချင်းထိတယ်ဗျာ … ကြိုးချင်းထား ကြိုးခြင်းညိတယ် …မြန်မာဆိုတာ အရမ်း ရက်ရောတဲ့ ၊ သဘောကောင်းတဲ့ လူမျိုးဗျ …
မြန်မာ နဲ့ တရုတ်နဲ့ ညား မွေးလာတဲ့ ကလေးက တရုတ်နဲ့တူတယ် …
မြန်မာ နဲ့ ကုလားနဲ့ ညား မွေးလာတဲ့ ကလေးက ကုလားနဲ့ တူတယ် …
နောက်ပိုင်းဆိုရင် အဲဒိ့ကလေးလဲ ကုလား ။ တရုတ် ဖြစ်သွားတော့တာပဲ …
မြေမျိုလို့ လူမျိုးမပျောက် ၊ လူမျိုမှ လူမျိုးပျောက်မယ် ဆိုတာ သိထားကြတာပဲ မဟုတ်လား ….
နောက် အကိုတို့လဲ ရခိုင်ပဲဗျာ …. အမျိုးသီလ ရက္ခိတ လို့ ဆိုထားတာပဲ ကိုး ….
နောက်တစ်ခုက ချစ်ကြည်ဖို့ဆိုရင် နှစ်ဖက်လုံးက သာတူညီမျှ ရှိရလိမ့်မယ် ….
သူများနှမ ကိုယ်ယူတုန်းက ယူပြီးတော့ ကိုယ့်နှမကြတော့ လုံအောင် ဖွက်ထားတာမျိုး ဆိုတာလဲ မကောင်းဘူးဗျာ … စည်းမထားတဲ့ ဗမာနဲ့ စည်းထားတဲ့ သူတွေ တွေ့တော့ စည်းမထားတဲ့ ဗမာတွေ နာတာ များတယ်ဗျ ……
နောက် အကိုတို့ ရခိုင်မှာ ဘာသာခြား အ၀င်မခံတဲ့ မြို့တွေ ရှိနေပါတယ် ။
ဘာကြောင့် ဒီမြို့တွေ ဖြစ်တည်လာသလဲ အကိုက ပိုသိမှာပါ . ။ ဒါကတော့ လုပ်ဇတ်မဟုတ်လောက်ပါဘူး ။ ရခိုင်ရာဇ၀င်မှာကို အတိအလင်း ရေးထားတာကိုး …။ရခိုင် အသက် ၊ ရခိုင် အရှက် ဘယ်လောက်နဲ့ လဲပြီးကာမှ ဒီမြို့တွေ ဒီလို ဖြစ်လာသလဲ အကိုက ပိုသိမှာပါ ။ အဲဒီလို မဖြစ်ခင်က မရောသင့်တာ မသနားသင့်တာကို ရောမိသနားမိလို့ ဘယ်လို ကိစ္စတွေ ဖြစ်ခဲ့ရသလဲ ဆိုတာလဲ ကျွန်တော် ရေးမပြတော့ပါဘူး .
သူကြီးရေ …. လူမျိုးရေး ခွဲခြား ရေးတာ မဟုတ်ဘူးဗျာ …..
ကိုယ့်ဟာကို သီးသန့်နေတာ အကောင်းဆုံးပဲ …လို့ ထောက်ပြတာပါ …။
သိထားသလောက်လေး ဗဟုသုတ ရှယ်ပေးတာပါ.. အသိ မလေးတစ်ယောက်ကို မေးကြည့်တော့ တခြားဘာသာဝင်တစ်ယောက်က သူတို့ မွတ်စလင်ဘာသာဝင်တစ်ယောက်နဲ့ လက်ထပ်လိုက်ရင် သူတို့ ဘာသာရေးသင်တန်း မဖြစ်မနေ တက်ရပါတယ်.. အဲ့ဒီအခါမှာ သင်တန်းလာတက်တဲ့သူအနေနဲ့ လမ်းစရိတ်၊ အလုပ်ရှိရင်လည်း ဖျက်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့် အဲ့ဒီနစ်နာမှုတွေအတွက် ကရုဏာကြေး တစ်လကို RM 300 ပေးပါတယ်.. သူယူလိုက်တဲ့ မွတ်စလင်ဘာသာဝင်ကို ပေးတာမဟုတ်ပါဘူး.. ပြောရရင်တော့ ဘာသာရေးစည်းရုံးမှုအား၊ စည်းလုံးမှုအား အရမ်းကောင်းတယ်.. ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း မြန်မာပြည်မှာနေစဉ်တုန်းက ဘာသာရေးအမြင်ကျဉ်းသူတစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်.. ဒီမှာ မလေးတွေနဲ့ ရောထွေးနေထိုင်တဲ့အခါမှ ကိုယ်ကြားခဲ့ဖူးတာတွေ အမှား အမှန် သိခဲ့ရတာပါ.. ပြောကြစတမ်းဆိုရင် ဘာသာရေးတွေကို မျိုးစေ့ချပေးခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓ ၊ ယေရှု ၊ မိုဟာမက် တို့ ဟာ တခြားဘာသာဝင်တွေကို(လူသားအားလုံးအပေါ်) မေတ္တာတရား ထားရှိရမယ်၊ ကိုယ်ချင်းစာတရား ထားရမယ်လို့ သင်ထားခဲ့တာပါ.. ဒီ ဘာသာရေးတွေကို ပြန်လည်ပို့ ချပေးတဲ့ တချို့ တချို့ သော သူတွေ၊ တချို့ တချို့ သော အုပ်ထိန်းသူ မိဘတွေ(ဘယ်ဘာသာမှာမဆို) ကသာ ငါ့ဘာသာကသာအမှန်၊ သူ့ ဘာသာသည် အမှား ဆိုပြီး သင်ကြားပို့ ချပေးတာကြောင့် မဖြစ်သင့်တဲ့ ဘာသာရေးအမြင်ကျဉ်းမှုနဲ့ ပဋိပက္ခတွေဖြစ်နေရခြင်းပါ.. ယေဘူယျ ကျကျသာ စဉ်းစားကြည့်ပါ (အကယ်၍ ဘာသာတရားတစ်ခုခုသည် အမှားအယွင်းများသာဆိုလျှင် ဦးနှောက်ရှိတဲ့ လူသားတွေ ယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြမလား)ဆိုတာကိုပါ.. တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်သူတွေ အနေနဲ့ လည်း ကိုယ်အုပ်ချုပ်တဲ့တိုင်းပြည်မှာ တခြားဘာသာဝင်တွေအုပ်စိုးလာမှာစိုးတာကြောင့် တခြားဘာသာဝင်တွေကို နှိပ်ကွပ်တာဖြစ်နိုင်ပါတယ်.. ဒီ မလေးမှာဆိုရင်လည်း ဘာသာတရားလွတ်လပ်ခွင့်ပေးထားပါတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း တတ်နိုင်သလောက်တော့ကြပ်ကြပ် ချုပ်ကိုင်ထားတာပါဘဲ.. မြန်မာပြည်လည်း ထို့ နည်း၎င်းပါဘဲ.. တော်ဗျီ..ပြောတော့ဘူး ရှည်သွားဗျီ.. မောတွားဗျီ
ဘာသာတရားများ ချစ်ချစ်ခင်ခင် နားလည်မှုအပြည့်နဲ့ လေးလေးစားစား အတူတကွ ယှဉ်တွဲနေနိုင်တာကောင်းပါတယ်။
ကောင်းကောင်းဆိုးဆိုး ဘယ်လို အခြေအနေမျိုးမဆို….